Taariikhda wejiga Arial | Hal-abuurka khadka tooska ah
Ogaanshaha taariikhda xarfaha ayaa kuu noqon kara mid xiiso leh, haddii aad ogtahay in mararka qaarkood loo abuuray inay la tartamaan midba midka kale. Inkastoo kuwa kale loo abuuray shaqo gaar ah. Tani waa kiiska nooca Arial, markii hore waxaa loo abuuray si loo yareeyo kharashyada laakiin waxay ku dhammaatay inay la tartanto far kale oo caan ah: Helvetica.
Uma baahnid in aad leedahay indho weyn si aad u garato sida ay isaga mid yihiin, haa, waxaa jira farqi u dhexeeya labada qoys iyo jilayaasha qaar ayaa aad u kala duwan. Hoos waxaan idiinkaga warami doonaa wax yar oo ku saabsan taariikhda farta Arial, sifooyinkiisa iyo xafiiltanka ay xarfahan caanka ah maanta leeyihiin.
1 Taariikhda nooca Arial
2 Astaamaha farta Arial
2.1 Kala duwanaanshaha Arial
3 Helvetica VS Arial: Loolan
Si aad u ogaato goorta la sameeyay farta Arial, waa inaad dib ugu noqotaa 1982-kii, markaasoo Robin Nicholas iyo Patricia Saunders, oo ahaa laba ka mid ah shaqaalaha Monotype Imaging, ay go’aansadeen inay ka shaqeeyaan farta farta, taasoo lahayd shaqada la qabsiga daabacaadda, gaar ahaan daabacaadda. daabacaha laser. Waxay ahayd ilaa 1992-kii, markii Microsoft ay qaadatay go'aanka ay ku beddeshay magaceeda, taasoo ka dhalatay markii la bilaabay Windows 3.1.
Waxaa loo qaabeeyey iyadoo fikradda ah in la sameeyo weji qoraal ah oo la mid ah Helvetica, marka loo eego cabbirada iyo saamiga., si dukumeenti loogu talagalay Helvetica loo soo bandhigo oo loo daabaco si sax ah iyada oo aan loo baahnayn in la bixiyo royalties Helvetica. Waxaa loo arkaa nooc aad loo akhriyi karo, laakiin isla mar ahaantaana tayada hoose leh. Sannadkii 2007 waxa lagu beddelay xidhmada Xafiiska, ee nooca Calibri sida farta caadiga ah ee barnaamijyada sida PowerPoint, Excel, iyo Word.
Astaamaha farta Arial
Arial mararka qaarkood loo yaqaan Arial MT, waa nooc sans serif ah oo casri ah, oo leh qaab shaqaynaya, fudud oo caadi ah. Waxay awood u leedahay inay la qabsato qoraalka joogtada ah. Waxay leedahay astaamo aadaminimo. Waa mid ka mid ah xarfaha loogu isticmaalka badan yahay barnaamijyada sida Word iyo dhammaan noocyada Windows. Marka laga hadlayo sifooyinka nooca noocaan ah, waxaan dhihi karnaa taas Waxay leedahay sharciyo wanaagsan oo cabbirro kala duwan ah, waxaana lagu dabaqi karaa labadaba warbaahinta daabacan (xayaysiimaha, qoraallada, boodhadhka, wargeysyada...) iyo warbaahinta internetka labadaba..
Waxay leedahay nakhshad wareegsan oo ka badan Helvetica, oo leh qaloocyo siman. Istaroogyada waxaa loo gooyaa si siman, taas oo ka dhigaysa muuqaal farsamo yar. Qaabka glyphs ee asalka Carabigu wuxuu ka yimid nooca Times New Roman. Waxa kale oo ay leedahay tilmaamo, kuwaas oo ah tilmaamo ay ka kooban tahay si loogu daabaco si sax ah qalabka xallinta hooseeya sida kormeeraha.
Kala duwanaanshaha Arial
Farta Arial ka kooban yahay qaabab badan: Farta caadiga ah, Farta leh, Dhexdhexaadka, Farta Dhexe, Farta Weyn, Farta Wacan, Madaw, Farta Madow, Dhirnaanta Dheeraadka ah, Farta Ku Filan, Iftiinka, Farta Cidhiidhiga ah iyo dhiirranaan dheeri ah oo la isku ururiyey.
Arial: Waxa loo yaqaan Arial Regular, waxa ay kaga duwan tahay Arial Narrow ballackeeda.
Arial Black: Waxa kale oo jira Arial Black Italic. Tani waa qaab aad u culus. Waxa kaliya oo ay taageertaa Laatiinka, Giriigga, iyo Cyrillic.
Cidhiidhi Arial: Xabad cidhiidhi ah oo cidhiidhi ah, itaal cidhiidhi ah, fargeeto cidhiidhi ah. Waa qoys isku duuban.
Arial wareegsan: Arial Rounded Light, Arial Rounded Joogto ah, Arial Wareegay Dhexdhexaad, Arial Rounded Bold, Arial Rounded Dheeraad ah.
Fudud Iftiinka, Dhexdhexaadka Arial, Arial dhiirranaan dheeri ah, Fudud Iftiinka Cidhiidhi, Arial Cidhiidhi, Dhexdhexaad Shidiyay, Arial Bold Culays.
Monospaced: joogta ah, badheedh ah, dhiirran, dhiirran.
Helvetica VS Arial: Loolan
Labadan weji oo kala duwan ayaa u dhexeeya hal sano oo keliya marka la eego abuurkooda, iyo sababaha kala duwan ee loo naqshadeeyay. Tan iyo markii la sameeyay farta Arial, si joogto ah ayaa loo weeraray inay tahay "nuqul" nooca Helvetica. Ka dambe waxaa loo nashqadeeyay si uu ula tartamo wejiga Akzidenz Grotesk.
Waxaa la sheegay in sababta ugu weyn ee Microsoft ay u go'aansatay inay farta Arial u doorato barnaamijyadeeda ay tahay iyagoo awoodi waayay inay helaan farta Helvetica. Waxa kale oo la sheegay in Arial sidoo kale loo abuuray si ay ula tartanto nooca Helvetica, halkii ay ka noqon lahayd nuqul. Inkastoo isbarbardhigga maanta Arial si aad ah ayaa looga isticmaalaa Helvetica, ma aha sababta oo ah caan ah laakiin sababtoo ah helitaankeeda. Agaasimaha Monotype Allan Halley, sanado ka dib, ayaa ku dhawaaqay in ka badan hal mar in fikradda ah in qof kastaa leeyahay in aysan awoodin in ay iska bixiyaan shatiga Helvetica waa gebi ahaanba khalad, sababtoo ah sida uu sheegay, kaliya horumarinta Arial ayaa maalgelin kara waddan yar.
Haddii aad rabtay inaad wax badan ka ogaato farfaha kale sida Helvetica, waxaan kaaga tagayaa isku xirka laba maqaal, mid ka mid ah waxaad awoodi doontaa inaad ogaato dhammaan taariikhda qoraalkan caanka ah. Iyo tan labaad, maqaal kale oo ka hadlaya Helvetica documentary. Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu ahaa mid xiiso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » taariikhda nooca arial
Sheeko aad u xiiso badan. Mahadsanid.